Kuvuleke iminyango enikwa uhlelo - Ilanga News
Home Izindaba Kuvuleke iminyango enikwa uhlelo
Kuvuleke iminyango enikwa uhlelo
UDJ Hlo othole ithuba elingandele bani lokwethula uhlelo iKasi Vibe kwiSoweto TV.
UNYELWE yinyoni esandleni uDJ wodumo lwama-piano osanda kukhipha ingoma eshisa izikhotha ethi “Festive” enikwa ithuba lokwethula uhlelo oludla ubhedu kwi-Soweto TV, iKasi Vibe olungena ngo-14h00-17h00 phakathi nezinsuku.
UHlosiwe “DJ Hlo” Mthalane (23) waseSeaview, eThekwini osematheni kulezi zinsuku ngenxa yeFestive okuyisingle yakhe yesibili utshele ILANGA ukuthi uthe eyokhuluma kulesi siteshi ngale ngoma yakhe entsha (Festive), wanikwa lolu hlelo kwathiwa makalwethule.
Uqale ukwelethula ngesonto eledlule. Uthe ukunikwa lolu hlelo kumehle ngehla, kodwa ulijabulele kakhulu ithuba anikwe lona.
“Bengiye ngivele kumabonakude uma ngenza izikhangiso, bengiqala ukuvela ngiyokhuluma ngengoma yami kanti ngizofika kuvuleke omunye umnyango,” kusho yena.
Kulolu hlelo olunezinto eziningi okubalwa uhlu lwezingoma ezikhethwa ngababukeli, wukudlalwa kwezingoma zabasafufusa uthi ukuthakasela kakhulu ukulwenza ngoba lumxhumanisa ngqo nababukeli.
“Engikujabulelayo wukuthola ithuba elizongifaka kakhulu ebantwini,” kusho UDJ Hlo.
Le ntokazi eneziqu zePsychology ezithole e-University of KwaZulu-Natal, ithi kayiboni ukuthi isazoke iwenze lo msebenzi ewufundele njengoba iminyango isivele yavuleka yonke kulokhu eyakhula ivele ikufisa.
“Okubalulekile kimina njengamanje wukuphusha umculo wami.
“Ingoma yami ngifisa kube yiyo ezohlukanisa unyaka njengoba ibalwa kwi-top 10 yezingoma ezithandwa ngabantu.
Uma ngingekho kumabonakude kangiphumuli ngenxa yokuphusha umculo wami emarenki, nginika abantu i-CD yami mahhala,” kusho le ntokazi.
Kusasa izobe yethula ngokusemthethweni yona le CD eStradini Lifestyle, eMtshezi iphelezelwa nguDJ Happygal, uCharacter, uFey M ne-Malini nabanye abaculi noDJ.
Previous articleKushone isilomo sebhola lomhlaba uDiego Maradona
Next articleWethuse abathandi bobumnadi eqopha ingoma uDOT